Chencan GM3560T Big Size 5 Axe koronosy CNC ny router Process Center - China Shandong Chenan milina
Chencan GM3560T Big Size 5 Axe koronosy CNC ny router Process Center
GM3560T dia Chencan tena mandroso 5 xis machining foibe, miaraka amin'ny matanjaka ampela, miasa haben'ny lehibe, haingana ny hafainganam-pandeha, avo sy ny fametrahana mazava tsara ny fotoana ela atraka.
1. Manangàna solosaina-nanampy endrika hanatratra ny optimum milina famolavolana rafitra. By mitsingevana gantry sy ny fomba raikitra latabatra, milina rehetra dia welded amin'ny fanamafisana ny rafitra vy. Manamafy Orina ny taolan-tehezany no welded anatiny. Maro ny fizotry ny adin-tsaina fanampiana fitsaboana indrindra hanatsarana ny milina rehetra ny Hentitra loatra sy ampiasaina amin'ny hafanana ambony tempering fitsaboana mba hahazoana antoka fa ny fahamarinan-toerana dia tsara, tsy mora ny ho sembana;
2. Z mpiray marina tsara TBI mandany avo avo baolina visy marina tsara sy ny rehetra sy ny ampela vola Z takela mampiasa ny mavesatra endrika hamela marina sy ny fahamarinan-toerana ambony, rehefa ho mafy ny asa fitaovana;
3. Guide rail sy fitoeran'entana no rakotra vovoka porofo anatiny. Vovoka porofo endrika hiaro azy ireo hadio;
4. Z mpiray fiaviana roa mampiasa azota mandanjalanja varingarina famolavolana, izay mahomby mampihena ny Loading ny maotera hery sy manitatra ny fanompoana milina fiainana. Tsy ilaina ny fampiasana milina tsindry rivotra;
5.Switzerland Nom 5 mpiray rafitra fanaraha-maso ny fifandraisana amin'ny USB sy ny rafitra fanaraha-maso ny varavarankely mba hahatonga ny asa bebe kokoa ary mora kokoa ny fanaraha-maso kabinetra amin'ny rafitra fifanakalozana Etazonia hafanana;
6. T slot nandatsaka ny asa vy latabatra, dingana amin'ny alalan'ny fitsaboana tempering avo, fa tsy mora ny ho sembana. Ny halavan'ny Max for miray latabatra dia 2m mba ho antonona eo amin'ny fitoeran-javatra;
7. hafa famolavolana sy ny piesy ampiasaintsika an-tampony marika, toy ny fiara Oil rafitra, fiara menaka zavona rafitra, fiara ampela mangatsiatsiaka rafitra amin'ny chiller, Alemaina Igus câble, fiarovana anoloana & indray varavarana ... rehetra famolavolana mba hahazoana antoka rehetra milina ny tsara indrindra fampisehoana;
• Miasa XYZ size: 3500mm * 6000mm * 2200mm;
• ampela: Italia 24Kw ampela (± 120 ° A, C ± 360 °) amin'ny rehetra napetraka 5 mpiray hanodinana ny lohany;
• ampela hafainganam-pandehany: 24000rpm / m;
• Table: manary table vy;
• Soisa Nom servo Motor sy ny rafi-fiara;
• Soisa Nom 5 mpiray rafitra fanaraha-maso amin'ny tena 5 mpiray asa;
• XY mpiray: voahadihady helical fitoeran'entana sy ny pinion fifindran'ny ;;
• Tool gazety: Linear karazana fitaovana gazety tamin'ny 8 fitaovana mpihazona;
• azota pneumatic rafitra;
1. Die orinasa: Ny sary sokitra ny aluminium, sombin-javatra, plastika, PVC, hazo, fiberglass sy ny fitaovana metaly malemilemy-;
2. bobongolo orinasa: Izay mety ho karazana lasitra fiara, sambo bobongolo, foundry bobongolo, fiaramanidina bobongolo, dia bobongolo, sns;
3. Plate fikarakarana orinasa: insulation, aliminioma, plastika sy simika, ny PCB, manetsika ny vatana fiara, niankohoka, lalana, anti-kintana birao manokana, epoxy, resin, ABS, PP, PE, sy ny karbaona mifangaro;
Chencan GM1530T 5 Axe CNC ny router Machine